Tag: Somaliya | Sagal Radio Services
Madaxweynaha iyo xubnaha Beesha Caalamka oo ka wada hadlay taageerada Ciidamada Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • March 18, 2016
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xarunta madaxtooyada kulan kula yeeshay wakiillada beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya, oo uu kala hadlayey daryeelka iyo taageerada ciidammada Soomaaliya.
Dowlada Soomaaliya oo eedeysay hay’ada WFP xilliyada ay gargaarka keento dalka
Sagal Radio Services • News Report • January 6, 2016
Dowlada Soomaaliya ayaa ku eedeysay hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan cuntada WFP in raashinka gargaarka ah ee keento dalka Soomaaliya ku soo beegto xilliada beeralayda Soomaaliyeed ay u soo go’ayaan miraha ay beerteen.
Maamulka Koofur Galbeed oo ka hor-yimid maamulka looga dhawaaqay Ceelbarde
Sagal Radio Services • News Report • December 26, 2015
Maamulka Koofur Galbeed ayaa ka soo horjeestay maamulka shalay loogaga dhawaaqay degmada Ceelbarde ee loogu magac daray Bakool sare, iyadoo xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ay taageerayeen maamulkan lidiga ku ah kan Koofur Galbeed.
Madaxweynaha oo markii u horeysay ka hadlay baaritaanka Caafimaad uu u tagay dalka Jarmalka
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii u horeysay ka hadlay baaritaanka Caafimaad uu u tagay dalka Jarmalka, isagoo sheegay in xaaladiisa caafimaad ay aad u wanaagsan tahay.
Kalfadhigii shanaad ee Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta furmaya iyo wadooyinka oo la xiray
Kalfadhigii shanaad ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa saaka lagu wadaa inuu furmo, iyadoo ciidamada Booliska dowladda iyo Boolis AMISOM ay adkeeyeen ammaanka xarunta Baarlamaanka, waxaana la xiray wadada hor marta.
Sugida Amniga Somalia oo Malaayiin Dollar ah lagu bixineyo
Sagal Radio Services • News Report • August 9, 2014
Dowladda wadanka Mareykanka ayaa waxaa ay ku dhawaaqday in Dowladda Somalia ay dhinacyo badan ka taageereyso iyadoo ku bixineysa Dhaqaale Fara badan si wax looga qabto Arimo ay ka mid yihiin amaan darada Dalka ka jirta iyo Dhismaha Ciidamada Booliska Soomaaliya .